﻿﻿ lead mining in zimbabwe
Shakib Al Hasan starred with bat and ball to lead Bangladesh to a crushing 87-run victory in their first one-day international against Zimbabwe in Chittagong.
Ireland's narrow world rankings lead over Zimbabwe will be at stake when their three-match one-day series begins on Friday
Zimbabwe's President Mugabe, 92, plans to keep ruling despite economic crisis
Successor? What successor?Zimbabwe President Robert Mugabe, who recently celebrated his 92nd birthday with a giant party in drought-stricken Masvingo, said this week that he had no plans to retire or groom someone else to lead the country.
Bangladesh 79-2 with 144-run lead over Zimbabwe at tea on day 4 of 2nd test
KHULNA, Bangladesh - Bangladesh batted steadily to reach 79-2 with a 144-run lead in its second innings on the fourth day of the second test against Zimbabwe on ThursdayLeft-arm spinner Shakib Al Hasan claimed his 13th five-wicket haul to help.
Mining shares lead FTSE 100 higher
Mining companies help to pull the FTSE 100 higher as the recent rally in commodity prices continu
PDAC 2016: Large miners should work flexibility into their production profiles
The mantra in mining has almost always been bigger is better, but such a strategy can lead to massive oversupply when demand falters
Bangladesh crush Zimbabwe to win ODI series
Bangladesh beat Zimbabwe by 58 runs in the second one-day international to take an unassailable 2-0 lead in a three-match series in Dhaka on Monday Replying.
Bangladesh beats Zimbabwe by 21 runs in 4th ODI, leads series 4-0
DHAKA, Bangladesh - Bangladesh was on the verge of sweeping Zimbabwe in their one-day international series after winning the fourth match by 21 runs on FridayThe bowlers put up a disciplined performance for the hosts to lead the series 4-0,.
Bangladesh reaches 201-5 at stumps on day 4 of 2nd test against Zimbabwe
KHULNA, Bangladesh - Bangladesh recovered from a mini collapse in the middle order to reach 201-5 and stretch its lead over Zimbabwe to 266 at stumps Thursday on the fourth dayMahmudullah on 63 will resume the fifth day with Shuvagat Hom, who.
TORONTO - The Toronto stock market closed modestly higher Thursday, with mining issues leading the way even as an early rally in copper prices faded
Oct 3 (Infostrada Sports) - Scoreboard in the second One Day International between Zimbabwe and Pakistan on Saturday in Harare, Zimbabwe Zimbabwe Innings H .
David Miller and JP Duminy lead South Africa to World Cup victory over Zimbabwe
A RECORD-BREAKING partnership of 256 by David Miller and J Duminy led South Africa to a 62-run win over Zimbabwe in their opening World Cup Pool B match
Sabbir Rahman starred with both bat and ball on Sunday as Bangladesh crushed Zimbabwe by 42 runs in the second Twenty20 international to take a 2-0 lead in t.
Looking for series victory, Bangladesh expects tougher challenge from Zimbabwe in 2nd test
KHULNA, Bangladesh - Bangladesh expects a tougher challenge from Zimbabwe in the second test starting Monday as the hosts seek to clinch the three-match series and leapfrog their opponents in the ICC cricket rankingsVictory in Khulna will give.
At least 11 people have died and several others have been injured during a stampede at a church service in the Zimbabwean mining town of Kwekwe, police said .